AKHRISO: Khudbaddii Madaxweynaha Eritrea uu ka jeediyay soo dhoweynta Madaxweyne Farmaajo | gobolada.com
AKHRISO: Khudbaddii Madaxweynaha Eritrea uu ka jeediyay soo dhoweynta Madaxweyne Farmaajo
Hadal-jeedinta Madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki uu ka jeediyay munaasabadda soo dhoweynta Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa.
Mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya,
Anigoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka dalka Eriteriya waxaa farxad weyn ii ah in aan idin ku soo dhaweeyo gurigiina labaad Mudane Madaxweyne adiga iyo wafdigaaga sharafta leh.
Xiriirrada taariikhiga ah ee u dhexeeya labada shacab ee Ereteriya iyo Soomaaliya waxay ka soo unkameen bah-wadaagta aan ku nahay xadaaradihii hore ee ka jiray gobolka Geeska Afrika iyo in aan xisaabsannahay qaybta koonfureed ee Jasiiradda Carabta.
Intaas waxaa sii dheer, in xilligii uu bilowday gumeysiga reer galbeedka ee Gobolka ay labadeenna shacab isgarab sadeen, si wada jir ahna ay iskaga caabiyeen ugana dhiidhiyeen gumaystahaas.
Markii aan ka guuleysannay gumaystaha, dagaalkii qaboobaana uu bilowday, waxaa sii xoogeystay xiriirka labada shacab oo gaaray heer uu ka tilmaamnaado Geeska Afrika, inagoona noqonnay labada dal ee isugu dhow dalalka Geeska Afrika.
Waxaan ku faannaa taariikhdan. Ixtiraamka dadka Eriteriya ay u hayaan walaalahooda Soomaaliya ayaa ku ku saleysan sooyaalkan wada jirka ah ee faca weyn.
Wax badan ayaan ka barannay caqabadahii hore ee inoo soo maray tobannaankii sano ee la soo dhaafay. Dhammaanteen Soomaaliya, Itoobiya, Eriteriya iyo Suudaan waxa aynu si dhab ah ugu istaagnay dib u dhiska dalalkeenna, innagoona haysanna fursad taariikhi ah aynu ku dhisan karno iskaashi buuxa ee dalalka Gobolka Geeska Afrika.
Dhismaha iskaashiga iyo wada jirkeenna waxaa lagu wiiqay kala fogeyn ku saleysan qowmiyado,isir iyo qabiil. Horumarinta dhaqaalaha iyo barwaaqada waxaa lagu bedelay faqri, saboolnimo iyo gaajo, iyadoona ay xoogeysatay dhaca iyo boobka shisheeyuhu ina ku hayaan iyo musuq maasuq baahsan oo gudaheenna ka jiray.
Madaxbannaanida Dowladaheenna iyo dhisiidda awoodaha hay’adaheenna dowliga ah waxaa madaxa kaga istaagay Hay’adaha Caalimaga ah ee Qaramada Midoobey iyo ururrada aan Dowliga ahayn (NGOs).
Sida ku cad xaqiiqda dhabta ah, ajendayaasha shisheeye iyo fara gelintooda maanta, waxa ay ku shaqaysanayaan magaca diinta, iyagoo adeegsanaya fikir sumeysan oo gurracan kaasoo ah argagixisada.
Inkastoo dhibaatooyinka nasoo maray ay badnaayeen, haddana waxaa muuqata in aan maanta galnay marxalad cusub, maadama aysan waligeed sii jireyn colaadaha iyo xasillooni darradu, waxayna u egtahay in haatan ay dhammaad yihiin.
Dadka reer Eritrea waxay muujiyeen adkeysi weyn oo ku aaddan dhammaan isku dayada ka dhanka ahaa, iyagoona ka hortagay qorshe kasta oo lagu wiiqayey. Dadka reer Itoobiya waxa ay ka guulaysteen siyaasaddii isir-qaybsi iyo daba socodka shisheeyaha. Haatan Waxay ku sii socdaan isbadal xawaare leh, si ay u dhidibbada ugu taagaan hannaan siyaasadeed oo toosan oo heer qaran iyo heer gobol ah.
Haddaba shaki kuma jiro in dadka Soomalida ah ay sida ugu dhaqsiyaha badan, ula jaanqaadayaan hayaanka horumarka ay umba qaadeen dalalka Itoobiya iyo Eritrea.
Waxaad ii ogolaataa inaan mar labaad kuu xaqiijiyo sida aan ugu kalsoonahay kaalinta wax ku oolka ah ee shacabka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin xaqiijinta iskaashiga aadka u sareeya ee aynu qorsheynayno. Waxan kuu rajeynayaa guul weyn oo ku aadan ka miradhalinta dadaalada aad ku howlantahay, waxan kaloo kuu rajeynayaa in aad ka gudubtaan caqabadaha idin horyaala oo aadna kaalintiina ka qaadataan iskaashiga amni iyo dhaqaale gobolka